Shirkadda Apple ayaa joojisay dhammaan iibka cusub ee Turkiga maadaama lacagta Turkiga ay burburtay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Turkiga » Shirkadda Apple ayaa joojisay dhammaan iibka cusub ee Turkiga maadaama lacagta Turkiga ay burburtay
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Waajib ah • Shopping • Technology • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Turkiga • Wararka Mareykanka
Qiimaha iibka alaabta Apple ee Turkiga waxaa ku jira dhowr canshuur iyo khidmad, sidaas darteed waxay u muuqdaan inay aad uga sarreeyaan Maraykanka.
Tuug fiiqan oo ah TurkeyLacagta qaranka ayaa lagu qasbay shirkad Maraykan ah oo tignoolajiyadeed Apple in la joojiyo iibinta dhammaan wax soo saarkeeda iyada oo loo marayo shabakadeeda rasmiga ah ee Turkiga.
Apple ayaa la filayaa in uu sare u kaco qiimaha si uu meesha uga saaro hoos u dhaca ku yimid qiimaha wax soo saarkiisa taas oo ay sabab u tahay hoos u dhaca ku yimid lacagta Liiraha Turkiga oo shalay hoos ugu dhacday 13.5 lira halkii dollar.
Hadda, AppleDukaanka khadka tooska ah ee Turkiga uma ogola dadka isticmaala inay ku daraan alaabada gaariga, iyadoo dhammaan walxaha lagu calaamadiyay 'ku meel gaar lama heli karo'.
Qiimaha iibka ee Apple waxyaabaha ku jira Turkey waxaa ku jira dhowr canshuur iyo khidmad, sidaas darteed waxay u janjeeraan inay aad uga sarreeyaan kan Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii Lira ay hoos u dhacday 15%, xaaladdu way rogtay, taas oo keentay in Apple ay joojiso dhammaan iibka ilaa ay hagaajinayso qiimaha.
Lacagta Turkiga ayaa maanta u suurtagashay in ay dib u celiso qaar ka mid ah khasaarihii soo gaaray, waxayna sare u kacday 12.6 lira halkii dollar saacadu markay ahayd 09:19 GMT, taasoo ka dhigan in 0.8% uu kordhay maalintii hore. Weli, khasaaraheeda ka dhanka ah cagaarka cagaaran ayaa taagan 40% sanadkan, iyadoo 19% hoos u dhac ku yimid tobankii maalmood ee la soo dhaafay oo keliya.